YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, October 05
5 Oct 2010 ဒိုင်ယာရီ
5 October 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/05/20100အကြံပြုခြင်း
ပဲခူး လူငယ်နှစ်ဦးကို သတ်သည့် စစ်ဗိုလ် နေပြည်တော် သို့ ပြောင်းလဲတာဝန် ထမ်းဆောင်
October 5, 2010 freedom news group
စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ညက ပဲခူးမြို့ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်း တောင်ပိုင်း မြလမ်းတွင် နေထိုင်သူမောင်စိုးပိုင်ဇော် အသက် (၁၉) နှစ်နှင့် မင်္ဂလာလမ်းတွင်နေထိုင်သူ မောင်အောင်သူဟိန်း အသက်(၂၃) နှစ် ဦးအား ကျဉ်ဘောက်မှာ ကျဉ်ကုန်သည် ထိ ရက်စက်စွာ ပစ်ခတ်ရန် အမိန့် ပေးခဲ့သည့်အခြေစိုက် ခလရ ၅၉ မှ စစ်ဗိုလ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုး သည် ပြည်သူကိုတရားလက်လွတ်သတ်ဖြတ်သည့် ထို အမှု အတွက် မည်သည့်အရေးယူမှု ကိုမျှ ခံရခြင်း မရှိဘဲ နေပြည်တော် သို့ ပြောင်းရွှေုတာဝန်ချထား ခံခြင်း ရသည် ဟု Freedom News Group မှစုံစမ်း သိရှိရသည်။
စက်တင်ဘာလ နှောင်းပိုင်း က ပစ်သတ်မှု တွင် ပါဝင်သည့် စစ်သားများနှင့် ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုး အားတောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု စတင်ပြီးနောက် ဘုန်းကြီး ၀တ်ခိုင်းထားသည်ဟု သတင်းရရှိပြီး နောက်ပိုင်း တွင် အများ ပြည်သူများ က တွေ့ မြင်သွား မည် စိုး၍ တပ်ရင်းမှုဒုတိယ ဗိုလ်မှုးကြီး မြင့်စိုး က တပ်ပြင် ထွက်ခွင့် မပေးဘဲ တပ်တွင်းမှာပင် လွတ်လပ်စွာ ထားရှိသည် ဟု သိရသည်။အောက်တိုဘာလဆန်း တွင် မူ ပစ်သတ်မှု တွင် အမိန့် ပေးသည့် ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုး အားနေပြည်တော် မှ ဆင့်ခေါ်ကာ လက်ရှိရာ ထူးအတိုင်း ပင် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း ဖောက်သည့်ဒေသ တွင် နာမည် ပြောင်း `၍ ရာထူးတိုးကာ ဗိုလ်မှုး ကိုလေး ဆိုသည့် နာမည်ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည် ဟု သိရသည်။ခလရ ၅၉ မှ စစ်ဗိုလ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီး သိဒ္ဓိစိုး သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦး ၏ သားသမီးတစ်ဦး ပင်ဖြစ်သည်။လူငယ်နှစ်ဦးအား ရက်စက်စွာသတ်သည့် တရားခံ များ အား သေဆုံးသူ ၏ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းသာမက ၊ ပဲခူးမြို့ သူမြို့ သား များ နှင့် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှ တရားနည်းလမ်းကျစွာ ဆုံးဖြတ်ပေးရန်လိုလားကြသည်။
ပညာတတ်တာ ရေပေါ်ဆီ လား၊ လူထု ပုခုံးကိုနင်းပြီး ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ချင်တာ ရေပေါ်ဆီ လား
ကျော်လင်းဦး ၊ ၊စစ်အေးခေတ် ဒီဘက် အနှစ် ၂၀ လွန်လာပေမယ့် မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လက်ဝဲ သံတွေ
မပျောက်သေး ပါ ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်မှာ ခွက်ပျောက်ခဲ့ပြီး ဒီဘက် စစ်အစိုးရခေတ်မှာလည်း အဖက်လုပ် ခြင်းမခံရတဲ့ ၆၀ ကျော် ၇၀ တန်းအဖိုးကြီးတွေက ပိုပြီး ခပ်ညံညံ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြော
ဆိုမှုတွေ ကို နှစ်ခြိုက် သဘောကျသူတွေ ရှိကောင်းရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တို့ရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေဟာ ပြောင်းလဲလာ တဲ့ ခေတ်အခြေအနေအပေါ်မှာ သူတို့ အတွက် နေရာမရှိတော့လို့ စိတ်အချဉ်ပေါက်ရာကနေ ပေါ်ထွက် လာတယ် ဆိုတာတော့ သိသာထင်ရှားနေပါတယ်။
ပညာတတ် ဆန့်ကျင်ရေး ဇစ်မြစ်
အစွန်းရောက် လက်ဝဲသမားတွေဟာ ပညာတတ်တွေကို အမြင်မကြည်ပါဘူး။ ကမ်ဘောဒီယားနိုင်ငံမှာ ဆိုယင် ပိုပေါ့လက်ထက်က ပညာတတ်တွေကို သုတ်သင်တဲ့အနေနဲ့ မျက်မှန် တပ်ထားယင်တောင် ပညာ တတ်လို့ ယူဆပြီး သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခပ်ငယ်ငယ်က ပညာတတ် လူလတ်တန်း စားဥာဉ် ဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို ကြားခဲ့ပါတယ်။ ပညာတတ်လူလတ်တန်းစား ဥာဉ်အတိုင်း တွေဝေတယ်၊ ယိမ်း ယိုင်တယ်၊ မပြတ်သားဘူး စသည်အားဖြင့် ဝေဖန်တာတွေ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီလို ပညာ တတ်တွေကို ရန်ုလုပ်နေတာဟာ အခုလို ၂၁ ရာစုထဲအထိ ရှိနေတုန်းပဲ ဆိုတာကတော့ အတော်လေး အံ့သြဖို့ကောင်းနေပါတယ်။
ဒီလို ပညာတတ်တွေကို ရန်လုပ်တတ်တဲ့ ရှေးခေတ်အဘိုးကြီးတွေထဲမှာ ဆရာ လူထု စိန်ဝင်းကတော့ အသံ အကျယ်ဆုံးပါ။ ကလောင်လက်နက် ကလည်းရှိတော့ ဆင်သွားယင် လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ နဲ့ ရေးချင်ရာကို ရေးနေပါတယ်။ သူ ရန်လုပ်တဲ့အထဲမှာ ပြည်တွင်းက NGO တွေပါသလို၊ အခုတော့ နိုင်ငံရပ် ခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့၊ သင်ခဲ့တဲ့ လူတွေဘက်ကိုပါ ဦးလှည့်လာပါပြီ။ ဒီလူတွေဟာ အောက်ခြေလွတ် တယ်၊ ဘ၀င်မြင့်တယ်၊ လူထုကို အထင်သေးတယ် စသည်ဖြင့် စွပ်စွဲချက် ပေါင်းစုံနဲ့ စွပ်ဆွဲပြီး ပြည်သူလူထု နဲ့ ရန်တိုက်ပေးထားပါတယ်။
တကယ်တော့ အသက်ကြီးလို့ ငယ်မူပြန်ပြီး ထင်ရာတွေ ရေးနေပေမယ့် ဘယ်ပညာတတ်မှ အောက်ခြေ လွတ်၊ ဘ၀င်မြင့်တာ၊ လူထုကို အထင်သေးတာ မရှိသေးပါဘူး။ အကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံအောင် မပြနိုင်ပဲ နဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်ရေးထားတာတွေဟာသာ ပြည်သူလူထုအတွက် တကယ် အကျိုးမရှိတဲ့ စာဖျင်း စာညံ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပညာအလိုအရဆိုယင် ဒီလို ပညာ တတ်ဆိုသူတွေ ကို ရန်လုပ်နေသူတွေဟာ ပညာ မတတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တတ်တယ်ထင်နေ တဲ့ တတ်ယောင်ကားတွေ လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပညာခေတ်ကြီးထဲက နောက်ကျန်နေသူတွေ သာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေး နဲ့ စာပေလောကမှာ လက်ဝဲအချောင်သမား စိတ်ဓါတ်က အခုထက်ထိ မင်းမူနေတုန်းပဲ ဆို တာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ လက်ဝဲ အချောင်သမား ဆိုတာ ပါစပ်က တကြော်ကြော်အော်၊ လက်သီး လက် မောင်းတန်း၊ လက်တွေ့မှာတော့ ဘာမှ ထိထိရောက်ရောက် မလုပ်နိုင်ပဲ လေကျယ်နေသူတွေကို ဆိုလို တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကမှ တိုင်းပြည်ချစ်သယောင်၊ လူထုအတွက် ပေးဆပ် အနစ်နာခံနေသယောင် လဲ ပြောဆိုတတ်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့လို လက်သီးလက်မောင်းမတန်းသူတွေကို သစ္စာဖေါက် လိုလို၊ ရေပေါ်ဆီ လိုလို၊ အနစ်နာမခံနိုင်သူ၊ မပေးဆပ်နိုင်သူ သူရဲဘောကြောင်သူအဖြစ် စွပ်စွဲတတ်ပါသေးတယ်။
ဒီလို လက်ဝဲအချောင်သမား စိတ်ဓါတ်နဲ့ လူထုကို သွေးထိုးပေးနေလို့လဲ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ ရှေ့ဆက် မရွေ့နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အသံကျယ်သူတွေသာများပြီး အလုပ် လုပ်နိုင်သူတွေ ရှား ပါတယ်။ ဒီလို သံကျယ်ကျယ်ပြောဆိုတာကိုက သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းအယူ အဆတွေလည်း ထွန်းကားနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးမှာ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရေ တိမ် နစ်ရတော့တာပါပဲ။ ဒါကို သင်္ခန်းစာမယူပဲ ဟိုဘက်လှည့် ရန်လုပ်လိုက်၊ ဒီဘက်လှည့် ရန်လုပ်လိုက် လုပ်နေတာဟာ ကိုယ့်တပ် ကို ကိုယ်ပြန်နင်း တာသာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို ရစရာမရှိအောင် စွပ်စွဲပြောဆိုပြီး လူထုနဲ့ ရန်တိုက်ပေးမှုရဲ့ နောက် ကွယ်မှာ ရိုးသားမှုရှိရဲ့လားဆိုတာ စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ နအဖ စစ်အုပ်စုကလည်း ပညာ ထက်မြက်ပြီး အမြှော်အမြင်ရှိတဲ့၊ လူထုအကျိုးကိုလုပ်နိုင်မယ့် လူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်မလာစေချင် ပါဘူး။ ဒီလိုလူတွေသာ ပြန်လာခဲ့ယင် စစ်အုပ်စုက ထိန်းချုပ်ဖို့ ပိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို နိုင်ငံ ခြားရောက်ပြီး ပညာတွေသင်ယူခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ဘာမှ အထင်ကြီးစရာမရှိဘူး၊ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူတွေသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ပြောဆိုနေသူတွေဟာ စစ်အုပ်စုနဲ့ တစ်ကြိတ်ထဲ၊ တစ်ဥာဏ်ထဲသာဖြစ်ပါ တယ်။ ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့သူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့နိုင်ငံ ရေးရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြနေသူတွေလည်း မရှားပါ ဘူး။ ဒီလိုလူတွေအတွက်ပါ ထည့်မစဉ်းစားပဲ သိမ်းကြုံးပြောဆိုတာတွေက စစ်အစိုးရရဲ့ အမှုတော်ကို တာဝန်ကျေကျေ ထမ်းရွက်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကွင်းပြင်မှာ လက်ညှိုးထိုး စွပ်စွဲပြီး တရားခံ ရှာတတ်တဲ့ သူတွေပဲ များပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုကျတော့ ခေါင်းပါးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြာလာတဲ့ နိုင်ငံရေး ဇတ်ရှုပ် ကြီးကို ဘယ်သူ့ကြောင့်၊ ဘယ်ဝါ့ ကြောင့်လို့ လက်ညှိုးထိုးနေမယ့် အစား စုပေါင်း တာဝန်ခံကြယင် ပို ကောင်း ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုနဲ့ ရေကုန်၊ ရေခန်းယှဉ်ပြိုင်နေရတဲ့ အခုလို အချိန်မျိုးမှာ ဒီမိုကရေစီ အရေး မအောင်မြင် ရတာဟာ ပြည်ပက ပညာတတ်တွေ ပေါက်ကရ ပြောလို့ ဆိုတဲ့ အယူအဆမျိုးတွေ မရှိသင့် တော့ပါဘူး။ ဒါဟာ ကိုယ့် တာဝန်ကို ကိုယ်မယူရဲ တဲ့ သူရဲဘော ကြောင်သူတွေရဲ့ ဆင်ခြေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေက ဘာတွေပဲ ပြောနေနေ ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ ကိုယ်၊ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဒေါင့်ကနေ တစ်တပ်တစ် အား မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းအလဲအတွက် လုပ်နေကြတယ်ဆိုယင် နိုင်ငံရေး တိုးတက်မှုတွေ အနှေးနဲ့ အမြန် တော့ ဖြစ်ထွန်းလာမှ သေချာပါတယ်။
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း / ၀၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀
တနေ့ဆီတုန်းက ရေဒီယိုစကားဝိုင်းတခုမှာ နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကာကွယ်ပြောဆိုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက “ဒီမိုကရေစီဆိုတာ တိုက်ပွဲနဲ့ရယူရတာမဟုတ်ဘူး၊ တိုက်ပွဲနဲ့ရခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာမရှိခဲ့ဘူး၊ ရှစ်လေးလုံးတိုက်ပွဲကြီးတိုက်ခဲ့လို့ ဘာများရခဲ့လို့တုန်း” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး ပြောသွားတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။
ဒီနေ့ပြောနေကြတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို ပဒေသရာဇ်လက်ထက်မှာ မျှော်မှန်းလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို တော်လှန်တဲ့ တိုက်ပွဲတွေအကြားကမှ ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာပါ။ ခြွင်းချက်မရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရဲ့ မဝေးတဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင် ပဒေသရာဇ် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်အောက်မှာ ဘာဒီမိုကရေစီမှ မရှိခဲ့သလို အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဘ၀မှာလည်း မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် ဘာဒီမိုကရေစီမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ အင်္ဂလန်က အုပ်ချုပ်စီရင်တာကို ငုံ့ခံနေရတာပါ။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက် မင်းတိုင်ပင်အမတ် ဆိုတာဟာ အခု နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက ပေါ်ထွက်လာတဲ့ အမတ်တွေလိုပဲ အဓိကကျတာကို ဘာမှမပြောနိုင်ဘဲ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကြီးကို ဆီထိုးပေးနေရတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်တွေက ချောချောမွေ့မွေ့ အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သိုင်းဝိုင်းပေးနေရတာပါ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကံကောင်းလို့ အမတ်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ “ကြံ့ဖွံ့မဟုတ်၊ တစည မဟုတ်” သူတွေဟာလည်း ပုံသဏ္ဌာန်အသစ်နဲ့ပေါ်လာမယ့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတခုကို ရေဆေးဆီလိုက်လုပ်ပေးရုံက လွဲလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြုပြင်သွားမယ်ဆိုတာကို တီဗွီအသံလွှင့်ရ မှာတောင် ပြောခွင့်မပြုတာ တွေ့ခဲ့ကြရပါပြီ။
မြန်မာပြည်မှာ ရာစုနှစ်တ၀က်ကျော် ကိုလိုနီစနစ် ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကို အသက်သွေးချွေးတွေ ရင်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့လို့သာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အဲဒီနောက် တွေ့ရတဲ့ ဖဆပလခေတ် ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို ရရှိတာပါ။ အဲဒီခက်ခဲပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ပွဲစဉ်ကြီးမရှိဘဲနဲ့ ဖဆပလကခေတ် ပါလီမန်ဆိုတာ ပေါ် မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကို သတိချပ်သင့်ပါတယ်။
အမှန်ပဲ၊ တိုက်ပွဲနဲ့ရခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာလည်း ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့မရှိပါဘူး။ ပိုကောင်း၊ ပိုပြည့်စုံအောင် လုပ်ကြရတာချည်းပါ။ ဒါပေမယ့် နအဖပေးမယ့် “စည်းကမ်းရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီ” ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း အသားကျသွားအောင်၊ ပိုကောင်းသွားအောင်၊ အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းနိုင်သည်ဆိုတဲ့ စာသားတွေကို ပျောက်ပြယ်သွားအောင် ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ (အခု ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေထဲမှာ အဲဒီလိုပြောနေသူတွေ အများကြီးပါ၊) ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကို သံဝေဂရလေဟန် လေသံနဲ့ပြောသွားတဲ့ အထက်အစမှာ ကိုးကားခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေနဲ့ ဒီနေ့ သူ ဒီလို ပြင်ပမီဒီယာတွေနဲ့စကားပြောခွင့်ရနေတာ၊ နအဖအသံလွှင့်ဌာနမှာထက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောလို့ရနေတာတွေဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့သင့်ပါဘူး။ အဲဒီအရေးတော်ပုံကြီးသာ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင် သူ့အနေနဲ့ အခုလိုပြောနေရင် မဆလ-န၀တ-နအဖ အစိုးရတို့ဟာ လွှတ်ထားမယ်လို့ထင်ပါသလား။ ရေကြည်သောက်တဲ့အခါမှာ ရေတွင်းတူးသူကို ကျေးစွတ်ရုံမက စော်ကားတာကတော့ လွန်လွန်းလှပါတယ်။
ဧရာဝတီ Tuesday, October 05, 2010 ဆောင်းပါး
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရရှိအောင် အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးစုံကို ဧရာဝတီသတင်း ဌာနက စုံစမ်းဖော်ထုတ် ထားပါတယ်။
နေပြည်တော်ခရိုင်မှာ ဇေယျာသီရိ၊ ပုဗ္ဗသီရိ၊ ဥတ္တရသီရိ၊ ဇမ္ဗူသီရိ၊ ဒက္ခိဏသီရိ၊ ပျဉ်းမနား၊ တပ်ကုန်း၊ လယ်ဝေးမြို့နယ်ဆိုပြီး
မြို့နယ် ၈ ခုရှိပါတယ်။ နေပြည်တော်ခရိုင်မှာ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ လူဦးရေ ၆ သိန်းကျော်နေထိုင်တယ်လို့ နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။
စစ်ရာထူးတွေကနေ အငြိမ်းစားယူထားတဲ့ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင် သူရ ဦးရွှေမန်းက
ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်က ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ အတွင်းရေးမှူး ၁ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးက ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးမြင့်လှိုင်က ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွေရဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလောင်းတွေအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ကြပါမယ်။
၀န်ထမ်းတွေ အများစုနေထိုင်တဲ့ နေပြည်တော်မှာ စစ်အစိုးရက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုသာ မဲပေးဖို့ ညွှန်ကြားထားသလို တခြားပြည်နယ်၊ တိုင်းက ပြောင်းရွှေ့ပြီး နေပြည်တော်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကိုလည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီရဲ့ ကြိုတင်မဲစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ လိပ်စာ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်နဲ့ မဲစာရင်းနံပါတ်တွေကို မှတ်သားပြီး ကြိုတင်မဲအဖြစ်
နေပြည်တော် မြို့နယ်သစ်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျေးရွာတွေက ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားတွေကိုလည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသုံးပြီး မက်လုံးပေး မဲဆွယ်ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ပေးတဲ့ ပထမဆုံး မက်လုံးက ကျပ်
၁၅ သိန်းတန် လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို အခမဲ့ပေးတာပါပဲ။
နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ သစ်တောတက္ကသိုလ်၊ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုပဲ မဲထည့်ဖို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ပါမောက္ခချုပ်တွေက ညွှန်ကြားတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက တဆင့်
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေကို ပြန်လည် စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်ပါတယ်။
ဇေယျာသီရိမြို့နယ်မှာ သူရ ဦးရွှေမန်းက ရပ်ကွက်တွေကိုလှည့်လည်ပြီး ရယကတွေ၊ ပြည်သူတွေကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာကို နားလည်ဖို့၊ လိုအပ်တာရှိရင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို အကြောင်းကြားဖို့၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကသာ နိုင်ငံတော်အတွက်
အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပါတီဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ အေးချမ်းသာယာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ လွှတ်တော် အမတ်လောင်းတွေကိုသာ မဲပေးရမှာဖြစ်ကြောင်း လိုက်စည်းရုံးတယ်။
အဲဒီနောက် ရယကတွေက လမ်းဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီကို မြို့နယ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ စည်းရုံးရေးမှူးတွေနဲ့ ပေးတွေ့စေပါတယ်။ ကြံ့ဖွံ့စည်းရုံးရေးမှူးက လမ်းဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင် ၇ ဦးကို ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်တွေ၊ အမာခံ မဲပေးမယ့်သူတွေ၊ ကြိုတင်မဲပေးမည့်သူတွေ စုဆောင်းပေးရင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီက လမ်းအခမဲ့ ခင်းပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးလှမြင့်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြိုတင်မဲ အသုံးပြုပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရအောင်လုပ်လို့ မရဘူးဆိုပေမယ့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီရဲ့ ပြည်သူပိုင်ဘဏ္ဍာ အသုံးပြုပြီး ပါတီဝင်စုဆောင်းတာတွေ၊
အမာခံမဲပေးမယ့်သူ၊ ကြိုတင်မဲပေးမယ့်သူ ရှာဖွေစုဆောင်းနေတာကို မသိချင်ယောင် ဆောင်နေပုံရပါတယ်။
ဦးလှမြင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုးကိုယ်တိုင်က သူ့ရဲ့ အထက်အရာရှိလည်းဖြစ်၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလည်းဖြစ်တဲ့ သူရ ဦးရွှေမန်း၊ ဦးသိန်းစိန် ၊ သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ ဦးမြင့်လှိုင်တို့ကို ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့အတွက် ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အထက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်ပွဲခံနိုင်မယ်လို့ ပြည်တွင်း သတင်းမီဒီယာအသိုင်းအဝန်း၊ နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝန်းက ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။
စိုင်းဇွမ်ဆိုင်း Tuesday, October 05, 2010
သံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသား လူငယ်များ စုပေါင်းဖွဲ့စည်း ထားသည့် ဗမာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူများ တပ်ပေါင်းစု (ဗဒတ) က ဦးဆောင်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေးစာမျာ ဖြန့်ဝေခြင်းကို ယနေ့ထပ်မံ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
နရီလင်းလက် Tuesday, October 05, 2010
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်တင်တင်လှ အသက် (၆၈) နှစ်သည် ၂.၁၀.၂၀၁၀ (စနေနေ့) နံနက် (၆း၄၅) နာရီအချိန်၌ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရစ်သော ရုပ်ခန္ဓာအား ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ ရေဝေးသုဿန် အအေးခန်းသို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) က သွားရောက်သယ်ဆောင် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ ၄.၁၀.၂၀၁၀ (တနင်္လာနေ့) နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရေဝေးသုဿန်၌ နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က အလှူမီနီယမ် မှန်ခေါင်းဖြင့် ဈာပနအခမ်းအနား ပြင်ဆင်ပေးကာ အသင်းသူ/သားများ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဝတ်အဖွဲ့မှ သံဝေဂလင်္ကာများ ရွတ်ဖတ်ပူဇော် အမျှပေးဝေခြင်းတို့ကို ကုသိုလ်ဖြစ်ပေးဆပ် ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ “နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)တွင် သရုပ်ဆောင်များအနေဖြင့် သွားရောက်ကူညီ သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း မပြုလုပ်ရန်” ဟူသော စာထုတ်ခဲ့သော်လည်း အနုပညာရှင် များဖြစ်သော ဘဘ ဦးသုခမှ အစပြု၍ ဒွေး၊ သုမောင်၊ ဂျော်လီဆွေ၊ ညီဘွား၊ ထွန်းထွန်းနိုင်၊ ဇော်ဝမ်း၊ စန္ဒာအောင်သိန်း၊ အေဝမ်း ဦးလှမျိုး၊ အလှဖန်တီးရှင် မိတ်ကပ် အောင်အောင် (တောင်ကြီး)နှင့် ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံများ၊ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များ၊ ဟာသသရုပ်ဆောင်များ၊ အနုပညာရှင်များတို့၏ မိဘဆွေမျိုး သားချင်းတို့၏ နာရေးကိစ္စများကိုလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)က လုပ်ဆောင် ပေးဆပ်လျှက် ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်သည် အမေ ဒေါ်တင်တင်လှ၏ အသုဘအခမ်းအနားတွင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသော မြင်ကွင်းများက ကျွန်တော်အတွက် သံဝေဂတရားများကို ထပ်မံ၍ ရရှိစေခဲ့သည်။
အကြောင်းမှာ - အမေ ဒေါ်တင်တင်လှသည် ကျွန်တော်တို့၏ ရုပ်ရှင်ဘက်တွင် မင်းသားကြီး ဦးရွှေဘ၊ တွံတေး သိန်းတန်တို့ လက်ထက်ကတည်းက မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူတဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ရုပ်ရှင်လောကတွင် ရုပ်ရှင်ဖလင်များ ပျက်တောက်သွားသည့်အချိန်တွင် ရုပ်ရှင်လောကသားများ ခေတ္တရုပ်ရှင် အနုပညာလောကနှင့် အလှမ်းဝေးခဲ့ကြရသည်။ တဖန် ဗီဒီယိုများ ပေါ်ကာစအချိန်ကာလတွင် ကျွန်တော်၏ ပထမဦးဆုံး သော ဗီဒီယိုဇာတ်ကားဖြစ်သည့် စာရေးဆရာမ မအေးလေး ဝတ္ထုဖြစ်သော “ဥက္ကာ” အမည်ရှိ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွင် ကျွန်တော်၏ မိခင်အဖြစ် ပြန်လည်၍ ရုပ်ရှင်အနုပညာလောကသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့၏ နောက်မှ ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသော မင်းသား၊ မင်းသမီးသစ်များ၏ အဒေါ် ဇာတ်ဝင်ခန်း၊ အမေ ဇာတ်ဝင်ခန်းများတွင် ပါဝင်၍ သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရသော ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတို့၏ ခိုင်းစေချက်များ (နိုင်ငံတော် ကိစ္စ) ရပ်များကို အချိန်မရွေး မိမိ၏ အလုပ်မအားလပ်သည့်ကြားမှ မိမိ၏ အနုပညာကို အသုံးချကာ ပေးဆပ်နေသူတဦးလည်း ဖြစ်သည်။ အမေ ဒေါ်တင်တင်လှကဲ့သို့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ ခိုင်းစေချက် များကို မိမိတို့၏ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စ အဝဝတို့ကို စွန့်လွှတ်ကာ ပေးဆပ်ခဲ့ကြသော အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်အတွက်၎င်း၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အတွက်၎င်း၊ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်၎င်း မညီးမညူပေးဆပ်ခဲ့ကြသော သရုပ်ဆောင်များ၏ နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သော ဈာပနအခမ်းအနားများတွင် ထိုကဲ့သို့ ခိုင်းစေခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အသင်းအဖွဲ့၊ အမှုဆောင်များသော်၎င်း၊ အဖွဲ့ဝင်များသော်၎င်း၊ တဦးတယောက်မျှ မတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းသည် သံဝေဂရဖွယ် ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည်နှင့်အညီ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်သော်၎င်း၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ရန်ပုံငွေပွဲများသော်လည်း မည်မျှပင် ပေးဆပ်ခဲ့ပါမူ ဤကမ္ဘာမြေပြင်မှ ထွက်ခွာသွားရသည့်အချိန်တွင် “သင် သွားလိုရာသွားနိုင်ပြီ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ယခု အချိန်မှစ၍ ပတ်သက်ခြင်းမရှိတော့” ဟူသော ပြန်တမ်းစာလေး တစောင်ကိုသာ လူကြုံနှင့် ထည့်ခိုင်းလိုက်ခြင်းသည် မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်သော လူလူချင်း စာနာစိတ်မရှိသော လုပ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်သည်။
ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါကြောင်း ပန်းခြင်းလေးတခု၊ ပန်းခွေလေးတခုကိုမျှ မမြင်တွေ့ခဲ့ရ။ ထိုနေ့ ထိုရက်တွင် ယင်း အနုပညာ အဖွဲ့အစည်းကြီး၏ အမှုဆောင်များ၊ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတို့သည် မည်မျှအရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းတခုကို တယောက်မကျန် လုပ်ဆောင် နေရပါသနည်း။
တလက်စတည်း ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် မေဆွိ၏ ဖခင်၊ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် (အန်တီဘေဘီ)၏ ခင်ပွန်း ဘဝတပါးသို့ ပြောင်းလဲစဉ်ကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် မေဆွိ မြန်မာပြည်တွင်ရှိစဉ်က၎င်း၊ မိခင်ဖြစ်သူ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် (အန်တီဘေဘီ) မကျန်းမာစဉ် အချိန်က၎င်း၊ နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားများ၊ ရန်ပုံငွေပွဲများတွင် စင်မြင့်ပေါ်သို့ အတင်းအဓမ္မ တက်ခိုင်း၍ “ဟေလားရေ မောင်တို့ …. ဟေလားရေ မောင်တို့” စသည့် သီချင်းကို မောပန်းနွမ်းနယ်မှုများကြားမှ မညှာစတမ်း သီဆိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ရသော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ ဈာပနအခမ်းအနားတွင်တော့ ထိုခိုင်းစေခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ မတွေ့ရှိခဲ့။
အနုပညာရှင်များသည် လူရယ်လို့ လူ့လောကကြီးထဲ ရောက်လာသည့်အချိန်မှစ၍ ပေးဆပ်မှု များစွာ လောကကြီးအတွက်၊ လူသားများအတွက်၊ နိုင်ငံတော်အတွက် ပေးဆပ်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ထိုသူတို့၏ နောက်ဆုံးခရီး ကမ္ဘာမြေကြီးကို နှုတ်ဆက်သည့် အခမ်းအနားတွင် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာဖြင့် နှုတ်ဆက်ခရီးလမ်းကြောင်းကို တက်ညီလက်ညီလာရောက် အားပေးပြုပါက ကျန်ရစ်သူ မိသာစုများအနေဖြင့်၎င်း၊ လာရောက်ကြသော ဧည့်ပရိတ်သတ်များ အတွက်၎င်း အမြင်တင့်တယ်၍ မင်္ဂလာရှိပေမည်။
အချုပ်ဆိုရသော် “ရုပ်ရှင်သည် ပြည်သူ့အတွက်၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသည် ရုပ်ရှင်လောက သားများအတွက်” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်များကို ထုတ်ဖော်ကြွေးကြော်ခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၊ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ အနုပညာရှင်များ ပတ်သက်ခြင်းမပြုရ ဟူသော စာများထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များအနေနှင့် လူလူချင်း စာနာစိတ်မွေးကာ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားသော ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး (မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပက္ခာ) အနက်မှ တပါးတည်းသော ကရုဏာတရားလေးကို လက်ကိုင်ပြု၍ မိမိတို့ အသင်းအဖွဲ့အား စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ဖြင့် အုပ်ချုပ်စေချင်တော့သည်။ သို့တည်း မဟုတ်ပါက မိမိတို့၏ အသင်းအဖွဲ့ အမည်နာမဖြစ်သော ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဟူသောအမည်ကို ပြောင်းလဲသင့်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း မေတ္တာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥပက္ခာထား၍ ကရုဏာဒေါသောဖြင့် ပြောကြားလိုက်ရပါတော့သည်။
အမေ ဒေါ်တင်တင်လှ၏ ရုပ်အလောင်းအား အအေးခန်းမှ ထုတ်လာစဉ် ခန်းမထဲအရောက် ကြည့်ရှုလိုက်သောအခါ အမေ၏ အောက်နှုတ်ခမ်းသည် လောကကြီးကို မကျေနပ်၍၎င်း၊ အနုပညာ လောကကြီးကို နာကျဉ်း၍၎င်း၊ ဝေဒနာကို ခံစားရ၍၎င်း … စသည့် နာကျဉ်းမှုများ၊ ကြေကွဲမှုများ၊ မကျေနပ်မှုများကြောင့်လားတော့ မသိ။ သွားဖြင့် ပြတ်လုနီးပါးကိုက်ထားသော ဒဏ်ရာတွင် သွေးစို့နေသည်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရသည်။ ဤ ဒဏ်ရာ၏ တရားခံ အဖြေကိုတော့ ကာယကံရှင်များသာ သိပါလိမ့်မည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ အများပြည်သူတို့အား ထဲထဲဝင်ဝင် နာရေးကူညီမှု၊ ဆေးဝါးကူညီမှု၊ ပညာဒါန ပေးဆပ်မှု စသည့် လူမှုရေးကောင်းမှုတိုိ့ကို နေ့စဉ်မပျက် အချိန်ပြည့် ပေးဆပ်မှုများ ပြုလုပ်ခွင့် ရခဲ့သည်မှာ ၃ နှစ် တိတိ ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော်အား အနုပညာလုပ်ဆောင်ချက်များ ပိတ်ပင်ခဲ့သော နိုင်ငံတော်မှ လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကာ သာဓု ခေါ်ဆိုလိုက်ပါသည်။
General boycott committee Statement
Voice of Burma Information Group Issue No. 782, OCTOBER 3, 2010
“ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် စစ်အုပ်စုနဲ့ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အတွက် သိတ်အဆင်ပြေသွားမယ်” လို့ ဆိုကြတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ မဲရုံတွေကို မသွားဘူးဆိုရင် အတိုက်အခံပါတီတွေဟာ နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ
ရှုံးနှိမ့်လိမ့်မယ် လို့လည်း ပြောကြပြန်တယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သပိတ်မှောက်ပြီးအလုပ်မဖြစ်ရင်
Alternative way က ဘာလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်။
တကယ်ဆို ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေက ပါတီမှတ်ပုံမတင်ခင်ကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာမှန်ရှေ့မှာရပ်ပြီး မေးခွန်းထုတ်မေးကြည့်သင့်တယ်။
“ ငါတို့သာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင် ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှု ရနိုင်ပါ့မလား။”
“ အဖြေရှိပြီးသားရွေးကောက်ပွဲမှန်းသိပေမဲ့၊ စစ်အုပ်စုစီစဉ်ထားတဲ့ ကော်မရှင် အောက်မှာ ခေါင်းလျှိုဝင်ခဲ့တယ်။ အသနားခံစာတွေတင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင်၊
Alternative Way တခြားနည်းလမ်း ကို ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ”။
မတရားမှုကို လေပြေလေးနဲ့ ဆက်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေအုံးမှာလား။
လူထုက အားကိုးလောက်တဲ့ သတ္တိတွေပြကြမှာလား။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း ကျနော်တို့အပါအဝင် ပြည်သူလူထုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခင်းပြဖို့လိုပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံက ရာရာအေဂျေဂျေ ဂျမေးရ် ရဲ့ အသံတချို့ကို
လက်ဆောင်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဗမာပြည်ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အနာဂတ်လမ်းကြောင်းရယ်၊ သန်းရွှေ ရဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ်ထားတဲ့ အာဃာတတွေရယ်--- ထပ်တူထပ်မျှတူလွန်းလို့ပါ။ ဒီတပတ် လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ
အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားတဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းတွေပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ သံသရာလည်မှုတွေ …….
စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွေက ငါ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကို အဆုံးသတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ ကျက်သရေတော်အောက်မှာ ငါဆန္ဒရှိသလောက် တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ်။
ငါ့အရိုက်အရာကို ဆက်ခံသူအဖြစ် ငါကြိုက်တဲ့သူကို ရွေးချယ်မယ်။”
ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းခြိမ်းခြောက် ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ မိုးချုပ်အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေက
အာဖရိကအနောက်ပိုင်း ဂမ်ဘီရာနိုင်ငံတလျောက်မှာ ဆူညံအက်ကွဲနေတတ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံဆီက လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီး ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံ ကို ဒေါ်ဒါ ဂျဝါရာ က ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၁ မှာ လက်ဝဲသူပုန်တွေရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့် ဆီနီကော စစ်တပ်ဟာ ဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ လက်ဝဲသူပုန်တွေကို မောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၇ မှာ လမ်းခွဲလိုက်ကြပြန်ပါတယ်။
“ရာရာ အေဂျေဂျေ ဂျမေးရ်” ဆိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်က တော်တော်လည်တဲ့လူပဲဗျ။
သူလို လက်ရဲဇက်ရဲရှိနိုင်မဲ့ စစ်အရာရှိတချို့ကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး စစ်အာဏာသိမ်းပစ်လိုက်တယ်။
ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်(AFPRC) ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး၊ ပညာတတ်စစ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကို
AFPRC ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်ခန့်ထားလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ပညာတတ်စစ်ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်က လူထုအုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကိုပြန်သွားချင်တဲ့ အရိပ်အယောင်တွေကို မြင်နေတဲ့အခါ
သူတို့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်း ပစ်ခပ်ချေမှုန်းခဲ့တယ်”
ဂမ်ဘီယာ အာဏာရှင် ဂျမေးရ် ရဲ့လက်အောက်မှာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ဘဝက လုံခြုံမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။
“တိုင်းပြည်မှာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုမှုတွေက သိတ်များလွန်းတယ်၊ ” ဆိုပြီး မီဒီယာတွေကို စိတ်တိုင်းကျချုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖန်တီးပြီး ပြည်သူတွေကို မျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
“၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ နယ်ခြားမဲ့သတင်းထောက်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ပြင်သစ် AFP သတင်းထောက်တဦး လည်းဖြစ်၊
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ The Point သတင်းစာ အယ်ဒီတာတဦးဖြစ်သူ၊
ဒေးတာ ဟိုင်ဒါရာ Deyda Hydara ကို သေနတ်သမားတချို့က ပစ်သတ်သွားခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း၂၀၀၄ ဒီဇင်ဘာ(၂၂) ရက်နေ့မှာ ဂျာနယ်လစ် (၃၀၀) ပါဝင်တဲ့သတင်းသမဂ္ဂ က ဦးဆောင်ပြီး ထောင်ချီနေတဲ့လူအုပ်ဟာ ဘန်ဂျူးလ်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်ကို စုဝေးရောက်ရှိလာကြတယ်။ အစိုးရဟာ ဒီလို မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်တဲ့ လူသတ်မှုတွေကို လေးလေးနက်နက်အရေးယူပေးရမယ်။
မတရားမှုတွေကို ကျနော်တို့အနေနဲ့ ရှုတ်ချတဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်တယ် လို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုကြတယ်။ ”
လူသတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာဏာရှင် ရာရာဂျမေးရ် ကို ခေါ်မေးတဲ့အခါတိုင်း
“ အိုး-လူသတ်မှုတွေကို ငါ မယုံကြည်ပါဘူး။
ငါ အလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်က မင်းတို့ရဲ့ဘဝတခုလုံးကို ဖမ်းဆီးထောင်ချထားလိုက်မယ်။
အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါကျမှ မင်းဟာ သိတ်ကိုအိုမင်းသွားပြီ။ငါတို့အစိုးရက မကျွေးမွေးနိုင်တော့ဘူး ဆိုပြီးလွှတ်ပေးလိုက်မယ်။ အိုမင်းမစွမ်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြားမှာ ထားပစ်လိုက်မယ်လေ” လို့
သတင်းထောက်တွေ၊ စာရေးဆရာတွေကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး
သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြာမှု့အောက်မှာနေမလား၊ ငရဲကိုသွားမလား လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရပိုင်မီဒီယာတွေကသာ အာဏာရှင်ဂျမေးရ် ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု အောင်မြင်ပုံတွေကို ရွမ်းရွှမ်းဝေအောင်ပြောဆိုခွင့်ရပေမဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကသတင်းထောက်တွေကတော့ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်နှောက်ရှက်မှုတွေ၊ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခံရမှုတွေခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အနောက်အာဖရိကဒေသဆိုင်ရာ
စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းတွေက ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေကို ရှာဖွေထုတ်ဖေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြသလို၊ ဂျမေးရ် ရဲ့ လူသားအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့
အနောက်အုပ်စုနဲ့ နိုင်ငံတကာငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေက အာဏာရှင် ဂျမေးရ်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့အနေနဲ့အကူအညီတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အခါ
စစ်ဝါဒီ ဂျမေးရ်ဟာ လစ်ဗျား၊ ကျူးဘား၊ ထိုင်ဝမ်၊ဆော်ဒီအာရေဗီယားနိုင်ငံတွေနဲ့နီးကပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သလို၊
လူထုကတင်မြှောက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရပ် နဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုဖေါ်ဆောင်မယ် လို့ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိသည့် ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးမဟာမိတ်များ ပါတီ ကို
တည်ထောင်လိုက်ပြီး ၂၀၀၁ အောက်တိုဘာမှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးခဲ့တယ်။
“မင်းတို့တတွေ ငါ့ကို မဲပေးပေးမပေးပေး ငါပဲအနိုင်ရလိမ့်မယ်။
အတိုက်အခံပါတီဘက်က ထောက်ခံတဲ့ဘယ်ဒေသမဆို ငါ့ရဲ့အစိုးရဆီက
အကျိုးအမြတ်ခံစားနိုင်လိမ့်မယ် မမျှော်လင့်ကြနဲ့ လို့ တရားဝင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။”
၂၀၀၁ အောက်တိုဘာမတိုင်ခင်အထိ၊ စစ်အာဏာရှင် ဂျမေးရ် ရဲ့ အမိန့်အမှတ် ၈၉ အောက်မှာ
နိုင်ငံရေးပါတီတွေတည်ထောင်ခွင့်မရခဲ့သလို၊ အစိုးရအရာရှိဟောင်းတွေကိုလည်း ၂၀၂၄ မတိုင်မခြင်း
တစုံတရာတော့ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ်။
မဲဆွယ်ကာလမှာ ပါတီတွေအတွက် စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက သန့်ရှင်းလွတ်လပ်မှုမရှိခဲ့ဘူး။
အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုလည်းလွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူး။
ရာရာ ဂျမေးရ် သာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပလေ့လာသူတွေက လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ နောက် ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြန်ပါတယ်။
“ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ အတိုက်အခံအင်အားစုတွေပေါင်းပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရပါတီဝင်တွေက မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ပါတီတွေအတွင်းကိုညီညွတ်ရေးပြိုကွဲအောင်
ကြံစည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် မစုစည်းနိုင်ခဲ့ပြန်ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်း
“အစိုးရပြောင်းလဲရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်” ကို ဖွဲ့စည်းကြပြန်တယ်။
ဒါပေမဲ့ အစိုးရရဲ့ ညစ်ပတ်ကောက်ကျစ်မှုတွေကို တဆင့်ခြင်းလိုက်ပြီးတုန့်ပြန်နေရတဲ့အတွက်
၂၀၀၇ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း စစ်အာဏာရှင် ရာရာ ဂျမေးရ် ရဲ့ပါတီကပဲ မဲအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
အတိုက်အခံပါတီတွေက ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလွယ်ကူပါဘူး” လို့ ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။
သောတရှင်တို့လည်း လူထုကို နိုင်ငံရေးထဲ ပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်မဲ့ အခြေအနေတခုကိုဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ။
ရာရာ အေ ဂျေဂျေ ဂျမေးရ်
ပဲခူး လူငယ်နှစ်ဦးကို သတ်သည့် စစ်ဗိုလ် နေပြည်တော် ...
ပညာတတ်တာ ရေပေါ်ဆီ လား၊ လူထု ပုခုံးကိုနင်းပြီး ပေါ်ပြ...
Voice of Burma Information Group Issue No. 782, O...